Banyere Anyị - Shenzhen Simida Intelligent equipment Co., Ltd.
.Lọ > Gbasara Anyị > Gbasara Anyị
Tọrọ ntọala na 2008, Smida bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu na-ejikọ ọnụ ụzọ nyocha akpaka R&D, n'ichepụta, ire ahịa, yana ọrụ ndị na-ere ahịa. Smida enyela akara ụghalaahia edenyere na Chinese na Bekee wee nye ikikere na mbubata na mbupụ na-enweghị onwe ya.
Ndị isi anyị nwere ihe karịrị afọ iri nke ahụmịhe ụlọ ọrụ. Ebumnuche anyị bụ ịbụ ezigbo onye nrụpụta akụrụngwa site na ịkwado ụkpụrụ nke 'ịke ihe eji achọ mma na nrụpụta akọ na uche', yana imepụta ndị ahịa ahịa anọ na ngwaahịa na ọrụ ọkachamara dabere na mmeri-wincooperation. N'ihe niile anyị na-eme, anyị na-achọ ịnye ndị ahịa anyị ọrụ na-adịgide adịgide.
Ka ọ dịgodị, anyị holdthe ngwaahịa mma dị ka anyị isi uru. Anyị kwenyere na nnukwu ụlọ ọrụ na-emepụta ihe ga-achịkwa mpaghara nrụpụta n'ọdịnihu na ụlọ ọrụ ndị na-azụ ahịa ga-arịwanye elu na-arụ ọrụ akpaaka iji gboo mkpa ha. Mgbe ụlọ ọrụ na-arịwanye elu na-eji akụrụngwa eme ihe, nkwụsi ike nke akụrụngwa ga-adị ezigbo mkpa. Na Smida, anyị na-ewere ya dị ka ọrụ dịịrị anyị iji hazie akụrụngwa nwere nkwụsi ike dị elu ma rụọ ọrụ dị mfe iji mezuo ihe ndị chọrọ ọgụgụ isi chọrọ.
Dika anwalechara ngwa anyi, zutara ya na otutu, ma ndi isi oru di iche iche jiri ogologo oge, anyi nwere obi ike na o nwere ike mezuo ihe ndi ichoro gi choro. Yabụ, họrọ anyị, ị ga - enweta ọrụ aka na udo nke nche! Anyị na-ele anya ịnụ n'ọnụ gị â € ¦
Visit SMIDA ontaneti